Fanasokajiana ny feon'ireo sary sokitra milina
Wood sary sokitra milina maro isan-karazany ny tsena safidy, araka ny asa dia azo zaraina ho fitaovana mandeha ho azy changer mpandrafitra feon'ireo sokitra milina sokitra dingana milina sy ny maro hafa, dia misy efatra mpiray telo-milina vita sokitra vita sokitra amin'ny lafiny asa, ary amin'ny ankapobeny woodwo ...
1. ireo fananan 'ny zavatra ara-nofo no manapaka ny amin'ny zavatra dia mafy hazo sy ny hazo nanapaka hazo mitambatra. Hazo mafy orina bebe kokoa azo zaraina ho malefaka hazo, hazo mafy sy ny hazo fanovana; Wood mifototra composites, anisan'izany ny veneer laminate, gitara, chipboard, directional chipboard, waffl ...
Ahoana foana sokitra hazo milina
Iza no nampiasa ny hazo sokitra milina olona maro (feon'ireo sokitra ny router) ho ankapobeny mihevitra fa tsy ilaina ny manadio ny CNC ny router, noho izany dia madio, azo lazaina fa Raha tsorina dia tsy misy fanaraha-maso, amin'ny mety fotoana hanadio ny latabatra amin'ny ny fitsipika, nahoana? Satria mino fa ny loza ...
Six antony mahatonga ny milina sokitra hazo dia avy amin'ny toerana
Tsara ny mitana AD CNC sokitra milina
1. Knife, mampiasa lasantsy na WD40 Chuck madio kokoa sy ny satrony. 2. Clamp ny tsindry Cap, raha izany, ny fitaovana dia mora ny hametraka. Raha ny Chuck tsy tratra ny tsindry ao anaty ny satroka, ny mampidina entana avy clamp dia clamped amin'ny maotera sy ny lavaka tsy azo namaha ny entana. 3. Tandremo hahitana raha ny Chuck ny ...
2018 dragona sary sokitra Mini toetra sokitra milina Attends
Abstract: 8-10 May, 2018, teo amin'ny faha-21 dokam-barotra iraisam-pirenena Beijing "sixin" fampirantiana natao tao amin'ny fampirantiana iraisam-pirenena sanyuanqiao fahiny in sanyuanqiao, Beijing, londiao Hafanàm-po an fanaraha-maso dia hanolotra avo-toetra farany Mini sokitra machining foibe an-toerana. Avy May 8 amin'ny 10, ...
Ahoana no hamahana ny olana ny dokam-barotra sokitra machin
Voalohany, ny dokam-barotra sokitra milina ampela maotera dia mafana: Vahaolana: Voalohany maso raha miasa ny paompy, ary raha te-hahita raha toa ka nivezivezy rano ambany. Faharoa, mahatsapa aho fa ny maotera tsy manan-kery ary tsy afaka miala: Vahaolana: Jereo ny faritra mba hijerena raha toa ny maotera tsipika no O ...
Ahoana no mifidy ny sary sokitra milina
Voalohany, ny fanasokajiana ny sokitra milina: Avy amin'ny Functional fijery, ny solosaina sokitra milina Mizara ho sokajy roa: kely hery sokitra milina sy ny hery ambony sokitra milina. Ny iva-pahefana sokitra milina dia manondro ny sokitra amin'ny milina kely mlg ...